Nanonona £ 4,000 i Neny mba hamerenana ny fidiovany toa reraka, nanao izany ho an'ny £ 45-Faucets ao an-dakozia, Faucets Pot Filler, Faucets fandroana | WOWOW
Home / Interior design / Nanonona £ 4,000 i Neny mba hamerenana amin'ny laoniny ny trano fidiovany toa reraka dia nanao izany ho an'ny 45 pounds
Nanonona £ 4,000 i Neny mba hamerenana amin'ny laoniny ny trano fidiovany toa reraka dia nanao izany ho an'ny 45 pounds
2020 / 09 / 27 FisokajianaInterior design 5412 0
Ny renim-pianakaviana iray nahavita naka aina vaovao tao amin'ny trano fidiovany tsy mahaliana noho ny ampahany amin'ny zavatra notanisain'ny mpanao trano.
Samantha Daley, 35 taona, izay miasa amin'ny sekoly ambaratonga fahenina, dia notononina £ 4,000 mba hamerenana ny fidiovany toa reraka.
Nanapa-kevitra ny hitazona ny vidiny i Samantha, avy any Huddersfield, nahavita nanamboatra ny efitrano misy azy amin'ny fampiasana kojakojam-bidy mitovy amin'ny Fablon, loko frantsay ary penina grika Amazon.
Ary ny vidin'ny fanovana Samantha dia £ 45 fotsiny.
Samantha, izay mizara ny fanovana ny fonenany ao amin'ny Instagram ao amin'ny @the_half_finished_house, dia nampahafantatra ny vondrona LatestDeals.co.uk: «Tiako ny hanao DIY. Izahay dia nividy do-er avo kokoa tamin'ny faran'ny 2016 ary nifandray tamin'ny trano aho hatramin'ny nifindrana. Manana efitrano fanampiny maromaro aho mandra-panatanterahana azy hatramin'ny voalohany.
“Nahazo ny aingam-panahiko tamin'ny Pinterest sy Instagram aho, saingy tsy nahitana lokon-tsary frantsay raha tsy tamin'ny fanidiana azy.
“Tsy tokony hanao drafitra be aho. Tena mikorontan-tsaina aho amin'ny fisafidianana loko ary tiako ny loko sahy sy ny atin'ny maizina.
Ny fomba fiheverany azy io taloha kokoa noho
“Nila nanova an'ity trano fidiovana ity nandritra ny taona maro aho, na izany aza tsy dia mampidi-doza izany - tsy fombako izany.
"Notanisaina 4,000 £ izahay noho ny famerenana amin'ny laoniny feno, izay vao tapa-kevitra ny hamita azy aho - ary ny fahitana ny teny frantsay no fanerena tadiaviko !.
“Novidiko an-tserasera ny loko, ny penina ary ny Fablon, ary efa nanana ny fitaovana ilaina amin'ny asako isan-karazany aho hanaovana ilay asa. Niasa teo amin'ny telo andro teo ho eo ny fitambarany.
"Ny vidin'ny Fablon £ 8.99 avy amin'ny Amazon, ny tahony dia avy amin'ny £ 10.99 ho an'ny 5, ny penina dia £ 3.99 avy any Amazon, ary ny loko dia avy amin'ny mpamatsy frantsay iray $ 6.95 isaky ny 150ml.
“Nijery fampianarana momba ny YouTube aho mba hahitana ny fomba tsara indrindra hampiharana ilay Fablon. Nanomboka tamin'ny marbra Fablon aho saingy tsy mandeha izany ka novaiko ho modely terrazzo ho solony.
“Miditra daholo - ankoatry ny trinkets faffy! - ny vidiny dia 45 pounds, ka fihenam-bidy iray manontolo!
“Nandray ny andraikiny aho avy eo. Ny vilany misy ny tarehy dia avy any Amazon, ny zava-maniry lehibe dia avy any afovoan-tokontany, ary ny vilany dia avy any Ikea.
“Ny sary sy ny vatana dia avy any Iamfy, fivarotana anatiny ankafiziko.
“Ny vazy kely sy fitoeran-jiro dia avy any Ikea, ary ny tsihy amin'ny tany dia avy amin'ny tsena iray any Mexico.
“Tsy miaraka amin'ireo zavamaniry ao an-trano - izay fihetsika lafo vidy indrindra amiko, sahabo ho 60 taona eo ho eo! - Nandany vola 40 £ fotsiny aho tamin'ny fitaovana ho an'ny john satria efa nanana ny zavatra hafa rehetra aho.
"Saingy azo inoana fa manodidina ny £ 100 ny sandan'ny entana nangoniko nandritra ny taona maro, miaraka amin'ireo zavamaniry."
Samantha dia faly niaraka tamin'ny asany, indrindra ny fieritreretana fa nahavita nahatsapa ny fijery ilainy tamin'ny fihenan'ny vidiny toy izany izy, nitahiry olona an-jatony tao anatin'ny fotoana.
"Ny soso-kevitro voalohany ho an'ny olona manantena ny hanao fampifandraisana dia ny manenjika ny ekipa Fb, Instagram ary ny Pinterest mba hahafahanao mahazo aingam-panahy sy tolo-kevitra avy amin'ireo olona nanao asa mifandraika!" manome izy.
“Toro iray hafa dia aza matahotra ny manandrana ary aza manahy raha sanatria ka tsy ataonao vanim-potoana voalohany ilay anarana marina. Mora ny miova lalana, ary raha sendra ataonao DIY, dia tsy tokony ho lafo ny fanovana ny eritreritrao.
“Fahombiazan'ny isam-batan'olona no nanosika ahy hanolotra izany. Ary noheveriko fa ny efitrano fidiovana any ambany no toerana mety indrindra hanombohana azy satria kely izany ary afaka mahitsy ny hanafoanana raha tsy voaporofo tsara izany.
“Taorian'ny nitanisana ahy tany am-boalohany hanoloana ny trano fidiovana dia somary kivy aho taloha. Tsy ampy daty handaniana vola be izany rehefa misy asa hafa maika hafa tiana hatao ao an-trano, toy ny lakozia ihany, noho izany dia nametra-pialana tamin'ny fandroana fandroana tao ambany rihana aho.
"Avy eo aho dia nahatsapa fa taloha dia hanana fahaizana mamelombelona ny efitrano fidiovana ho an'ny farany, ary raha vao avy nampiaiky volana ahy ny nanolotra azy io dia nanjary faly aho nanomboka !.
"Matetika aho mangataka andro nefa nahavita an'ity asa ity tao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Tiako tanteraka izany ankehitriny, ary iray amin'ireo faritra falifaly indrindra ao an-trano izy io na dia kely indrindra aza izy io.
“Mamelombelona ny hafanam-poko amin'ny famaranana ny 'tranoko efa tapitra' ary hanomboka ny asa manaraka aho izao - ny efitrano malalaka!”
Tom Church, mpiara-manorina ny LatestDeals.co.uk, dia nilaza fa: “4,000 £ dia vola be laniana amin'ny fanamboarana ny efitrano fitsaharana, ka hatreo amin'i Samantha ny satroka noho ny nanesorany ity fivoahana fidiovana ity ho an'ny ampahany kely amin'ny notononina izy.
Raha sendra te-hanaraka ny diany ianao ary manaisotra ny fanovana trano fihenam-bidy manokana, dia mety ho mpiara-miasa akaiky aminao indrindra ny vidin'ny elanelam-bidy mitovy amin'ny lamba Fablon, loko frantsay ary Ikea.
"Araka ny filazan'i Samantha, Instagram, Pinterest ary Fb dia tototry ny foto-kevitra, koa amporisiho ny tenanao fa aza mandany vola enim-bola an-tserasera mialoha ny hamakiana anao!"
Previous :: Tsy simba ny toro-lalana shower. Nahoana ny Vitality no manandrana manamboatra azy ireo? Next: Mpifanila vodirindrina tsara hanarenana, manitatra lakozia
2020 / 12 / 12 2179